सदाबहार सिउँडी - फूल बारी - नारी
जेष्ठ ११, २०७८ सिउँडी अर्थात् क्याक्टस । यो विश्वभर लोकप्रिय छ । बगैंचाको सौन्दर्य बढाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यो इन्डोर, आउटडोर दुवैमा राख्न मिल्छ । यसको विशेषता भनेकै अन्य बिरुवाभन्दा फरक देखिनु हो । यसको पातको आकारमा विविधता पाइन्छ । हरियो पातको डिजाइन नै अद्वितीय हुन्छ । बैठक कोठाको कुनै कुना सजाउन, झ्याल, पुस्तकको र्‍याक वा भित्तामा झुन्डाउँदा यसले घरको सौन्दर्य दोब्बर बढाउँछ ।
डेढ दशकयता नर्सरी व्यवसायमा संलग्न दयाकुमार द्वले ‘क्याक्टस’ सधैं बिक्री हुने बिरुवामा पर्ने बताउँछन् । ‘यो सबैले मन पराउने बिरुवा हो’ उनी भन्छन्, ‘धेरै बिक्री हुने बिरुवामा ‘क्याक्टस’ पनि पर्छ ।’ यो अनौठो र लोकप्रिय बिरुवामध्ये एक हो ।
‘क्याक्टस’ ग्रिक शब्द ‘काकटोस’ बाट लिइएको हो । जसको अर्थ हुन्छ, स्पाइकी प्लान्ट । यो प्रायः सुख्खा र गर्मी ठाउँमा पाइन्छ । अति गर्मी वातावरण यसका लागि अनुकूल हुन्छ । यो बाह्रमासे बिरुवा हो । यसका अधिकांश प्रजातिमा पात हुँदैनन् । भए पनि कम हुन्छन् । यद्यपि यो बिरुवा ढिलो बढ्छ । आत्मनिर्भर बिरुवाअन्तर्गत पर्ने ‘क्याक्टस’ ले जरा, पात र डाँठमा ओस सञ्चित गरी राख्छ । त्यसैले धेरै दिनसम्म यसले आफ्नो खाद्य सञ्चित र नियन्त्रित गरी राख्न सक्छ । यसलाई हल्का, हावा ओहोरदोहोर गर्ने ठाउँ र गर्मी ठाउँ चाहिन्छ । लगभग १८ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम यसका लागि ठीक हुन्छ । यसले सीधा घाम पनि सहन सक्छ ।
कहाँ लगाउने ?
‘क्याक्टस’ धेरैले इन्डोरमा राख्ने गरेको पाइन्छ । तर दयाकुमार भन्छन्, ‘यो इन्डोर प्लान्ट होइन ।’ जुनसुकै ठाउँमा यो लगाउन सकिन्छ । गर्मी वा सीधा घाम पर्ने ठाउँमा पनि राख्न सकिन्छ । हिउँ पर्ने ठाउँमा समेत यो पाइन्छ । बगैंचा, बार्दली, छत एवं कोठामा पनि रोप्न सकिन्छ । तर उज्यालो ठाउँ भने हुनुपर्छ ।
विश्वमा थरी–थरीका ‘क्याक्टस’ पाइन्छन् । नेपालमा धेरै प्रजातिका ‘क्याक्टस’ बाहिरबाटै ल्याइन्छ । विभिन्न प्रजातिका प्रत्येक ‘क्याक्टस’ को बिरुवा हेर्दा अलग देखिन्छ । कुनै प्रजातिको ‘क्याक्टस’ खान पनि मिल्छ । ‘ड्रागन फ्रुट’ ‘क्याक्टस’ मै फल्ने फल हो । सबैभन्दा बिक्री हुनेमा ‘इचिनेक्याक्टस’, ‘फेरोक्याक्टस’, ‘जिम्नोकोलियजियम’, ‘ओपटिया’, ‘मममिलारिया’ आदि हुन् । ‘जिम्नोकोलियजियम’ (मुन क्यान्टस) माथिल्लो भाग रंगीबिरंगी हुन्छ । धेरैजसो पहेंलो र रातो हुन्छ । यो फूल भने होइन, यसको माथिल्लो भाग रंगीन हुन झन्डै एक वर्ष लाग्छ । ‘ओपटिया’ जसलाई ‘पोल्का डट क्याक्टस’ का रूपमा पनि चिनिन्छ । यसमा हरियो रंगको पृष्ठभूमिमा सुनौलो रंगको डट हुन्छ । यो आकर्षक, अद्वितीय र ज्यामितीय देखिन्छ । ‘मममिलारिया’ मा काँडा हुन्छ । यो चाँडै बढ्छ र यसमा स–साना गुलाबी रंगका फूल फुल्छन् ।
कसरी हेरचाह गर्ने ?
‘क्याक्टस’ लाई कलमी, ग्राफ्टिङ गर्न सकिन्छ । यो रोप्न माटो, बालुवा, कोकोपिट र गाई–भैंसीको मल २५–२५ प्रतिशत मिलाउनुपर्छ । यसलाई पानी थोरै हाल्नुपर्छ । पानी धेरै भयो भने बिरुवा मर्न सक्छ । क्याक्टसको राम्रो स्याहार–सुसार भएन भने फुल्दैन । यसलाई फुलाउनका लागि यसको प्राकृतिक विकास चक्र पछ्याउनुपर्छ । जाडोमा कम र वसन्त ऋतुमा बढ्नुपर्छ । सुख्खा र चिसो ठाउँमा राख्नुपर्छ तर अँध्यारोमा हुनुहुँदैन । जाडोमा पानी एकदमै कम मात्रामा दिनुपर्छ । वसन्त ऋतु सुरु हुनेबित्तिकै पानीको मात्रा बढाउने र सम्भव भएसम्म घाम भएको ठाउँमा राख्नुपर्छ । माटो सुख्खा भएपछिमात्र पानी हाल्नुपर्छ ।
‘क्याक्टस’ मरुभूमिमा पाइने भए पनि घरको वातावरणमा समेत हुर्कन्छ । प्रशस्त प्रकाश भएको ठाउँमा यसलाई राख्नुपर्छ । इन्डोरमा राख्दा कृत्रिम प्रकाशमा राख्न सकिन्छ । गर्मी महिनामा सूर्यको किरण पर्ने गरी केही दिन घरबाहिर राख्न सकिन्छ ।
कति समय रहन्छ ?
जंगलमा पाइने ‘क्याक्टस’ सयौं वर्षसम्म रहन्छ । घरभित्र रोप्दा दश वर्ष वा त्यसभन्दा बढी समयसम्म रहन्छ ।
क्याक्टस अशुभ मानिन्छ ?
दयाकुमार भन्छन्, ‘प्राकृतिक प्रेमीहरूका लागि कुनै पनि बिरुवा अशुभ हुँदैन । सबै हरिया बिरुवाले अक्सिजन दिन्छन् । फरक यति हो कि कुनैले धेरै दिन्छन् भने कुनैले थोरै ।’ क्याक्टसका कतिपय प्रजातिले हावा शुद्धीकरण गर्ने पुष्टि भइसकेको उनी बताउँछन् ।
फाल्गुन २५, २०७२ - सदाबहार ट्युनिक फेसन
पुस ७, २०७२ - सदाबहार सुन्दरी करिष्मा मानन्धरकाे सुन्दरताकाे राज
मंसिर २५, २०७२ - सदाबहार सौन्दर्यका लागि
चैत्र २, २०७१ - सदाबहार आइसक्रिम
फाल्गुन १, २०७० - सदाबहार सुन्दरी
वाटर प्लान्ट्स पुस १२, २०७८
पुष्प मेलामा ७९ लाखको कारोबार कार्तिक ३०, २०७८
सुन्दर गोदावरी कार्तिक ८, २०७८
मनमोहक बेगुनिया आश्विन ८, २०७८
घरैमा जडीबुटी भाद्र १६, २०७८
वर्षाका फूल श्रावण १३, २०७८